Maxkamadeynta Nin Sheegtay Illaahnimo oo ka Bilaabantay Moscow!!! | ToggaHerer
← Israel oo ka dhisi doontaa in ka badan 1,222 unugyo cusub oo dejin ah Daanta Galbeed ee Falastiin!!!
Shirkad Ammaan oo laga Xaday Dahab Gaadhay Qiyaastii $ 13 milyan!!!!! →
Maxkamadeynta Nin Sheegtay Illaahnimo oo ka Bilaabantay Moscow!!!
Published on January 12, 2018 by Liibaan
Maxkamada Moscow ayaa bilawday dhageysiga kiis kooxa diimeedka Andrei Popov, oo sheeganaysa inuu yahay “iIllaahnimo” iyo shan ka mid ah kuwa taabcsan.
Waxaa la filayaa in xeer ilaaliyahu uu ku dhawaaqi doono dhageysiga kowaad ee dacwadda, kadibna eedaysanayaasha waxay ka jawaabi doonaan eedooda . Maxkamaddu waxay sii wadi doontaa inay eegto caddaynta iyo su’aalaha markhaatiyaasha.
Intii lagu jiray dhegeysiyada maxkamadaynta, maxkamad waxay ka sii daysay xabsiga Ninkan Sheegtay Illaahnimada ilaa May 28.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha Ruushka ayaa soo warisay in shan qof oo taabacsany ‘Popov’ sidoo kale lagu eedeeyay in ay ka qaybqaateen hawlaha hay’ad aan ganacsi ahayn oo ku xad gudubta xuquuqda aadanaha , oo ah hay’ad diineed oo shaqadeeda lala xidhiidhinayo rabshadaha muwaadiniinta, waxyeelo u geysanaya caafimaadkooda iyo dacaayad aan sharci ahayn ” Koox dad ah. ”
Baadhitaan ayaa lagu ogaaday bishii Sebtembar 2007 in kooxdani ay abuureen dariiqo ay ku lug leeyihiin ee waxyeelada caafimaadka muwaadiniinta. Tiro dad ah oo ogaa Daa`ifada Bopov waxay ku lug lahaayeen maamulka bulshada.